तपाइँको साइटलाई जगेडाहरूको लागि पेश गर्न सक्रिय तरिकाहरू के हो?
यदि तपाईंलाई आश्चर्य छ कि लिङ्क निर्माण अझै जीवित छ वा छैन, यो लेखले तपाईंलाई यस प्रश्नको स्पष्ट जवाफ दिन्छ.
हामी विश्वासको साथ भन्न सक्छौं कि लिङ्क इमारतले पङ्क्ति र ब्रान्ड प्राधिकरणमा ठूलो असर पारेको छ. इनबाउन्ड लिङ्कहरू खोज इन्जिन द्वारा प्रयोग गरिन्छ कि कसरी सान्दर्भिक वेब वेबसाईटले यो श्रेणीमा खोज्न मद्दत गर्दछ.
वास्तविकतामा, केवल अनौपचारिक लिंक इमारतको रूपमा मान्न सकिन्छ. Google ले इनबाउन्ड लिङ्कहरूको गुणस्तरमा धेरै हेरचाह गर्दछ र सबै स्प्यामी लिङ्क निर्माण योजनाहरू पत्ता लगाउँदछ. अनौपचारिक लिंक कुनै पनि व्यावसायिक वेबमास्टरहरूको लागि दिनको काम हुन सक्दैन, जुन जैविक वेबसाइट ट्राफिक उत्पादनको जिम्मेवारी छ. आजकल, तपाईंको लिङ्कहरूको संख्या केही छैन. 2012 मा अन्तिम गुगल अपडेट पछि, सबै समान रूपमा सिर्जना गरिएको ब्याकलिंकहरू डेन्डिङ हुनु पर्दछ.
यही कारणले यस लेखमा हामी केवल जैविक लिङ्क निर्माणको बारेमा कुरा गर्नेछौं जुन अहिले 2017 मा अझै फायदेमंद छ. गुणस्तर सामग्रीले प्राकृतिक लिङ्क निर्माण अन्त्य परिणामहरू चलाउँछ. तपाईंका सबै प्रयासहरू खोज परिणाम पृष्ठमा उच्च श्रेणीको साथ इनाम गरिनेछ. यदि तपाइँ निरन्तर जैविक ट्राफिक प्रवाह प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईंलाई विभिन्न स्वतन्त्र, उच्च गुणस्तर ब्याकलिङ्कहरू निर्माण गर्न आवश्यक छ.
तपाईंको डोमेन प्राधिकरण बढाउनको लागि, तपाईंलाई उच्च पीआर वेब स्रोतहरूमा लिङ्कहरू बनाउन आवश्यक छ जुन Google द्वारा अत्यधिक इनाम छ।. नियमको रूपमा, यदि तपाइँसँग सानो वा नयाँ व्यवसाय छ भने त्यस्ता वेब स्रोतहरूमा लिङ्क सिर्जना गर्न जटिल देखिन्छ. यद्यपि, यो अझै पनि सम्भव छ, र म भन्न चाहन्छु किन. लिङ्क तल निर्माण रणनीतिहरू पछ्याउनुहोस्, र तपाइँ ट्राफिकमा वृद्धि देख्न सुरु हुनेछ.
(1 9) तपाइँको साइट ब्याकलिङ्कका लागि कसरी प्रस्तुत गर्ने?
Quora एक आदर्श शैक्षिक वेब स्रोत हो जुन प्रयोगकर्ताहरु लाई आफ्नो समस्याहरु लाई हल गर्न को लागी डिजाइन गरिएको छ. यो एक नि: शुल्क र खुला भ्वाइस दर्शकहरूको प्लेटफर्म हो जसले प्रयोगकर्ता र वेबमास्टरहरूको लागि फाइदा प्रदान गर्दछ. तपाईंले गर्नु आवश्यक छ सबै कुरा तपाईंको बजार आलासँग सम्बन्धित कीवर्ड खोज्नु हो. फलस्वरूप, तपाईंले सयौं हजारौं प्रश्नहरूको जवाफ दिनुभएन. त्यसपछि तपाईलाई समस्या महसुस गर्नुहोस् जहाँ तपाइँ व्यावसायिक महसुस गर्नुहुन्छ, र यदि तपाईंको साइट भित्र सम्पर्कको एक विशिष्ट टुक्रा हो जुन विषयमा थप जानकारी प्रदान गर्न मद्दत गर्न सक्छ, यसलाई लिङ्क राख्नुहोस्।.
मा सहायक हुनुहोस् अर्को उच्च पीआर वेब स्रोत जहाँ तपाई जैविक र गुणस्तर ब्याकलिङ्कहरू निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ HARO (एक रिपोर्टर बाहिर मद्दत). यो एक प्लेटफार्म हो जहाँ पत्रकारलाई जान्छ जब तिनीहरूलाई मद्दत चाहिन्छ. तिनीहरूले आफ्ना प्रश्नहरू प्रकाशित गर्छन्, र यदि तपाईले तिनीहरूलाई सान्दर्भिक र उपयोगी जवाफ प्रदान गर्न सक्नुहुनेछ भने तपाईले केहि निःशुल्क प्रेस प्राप्त गर्ने मौका पाउँदछ. उपयुक्त प्रश्नहरू खोजी गर्ने योजनाको समान काम गर्दछ. तपाईले आफ्नो लक्षित खोजी सर्तहरू खोज्न आवश्यक छ र केवल ती प्रश्नहरूको जवाफ दिनुहोस् जहाँ तपाईं सक्षम महसुस गर्नुहुन्छ. यदि एक पत्रकारले तपाईंको प्रतिक्रिया गुणस्तर पत्ता लगाउँदछ भने, उहाँले यसलाई समाचार वेबसाइटमा प्रकाशित गर्न वा फोर्ब्स, सर्च इन्जिन जर्नल वा इन्टरप्रनियर जस्ता पत्रिकाहरू प्रकाशित गर्नुहुनेछ।. नतिजाको रूपमा, तपाइँले गुणस्तर लिङ्ग रस र लक्षित ट्राफिक प्रवाह पाउनुहुनेछ. निस्सन्देह तपाईले यो समाचार प्लेटफर्मबाट लिङ्कको एक टन प्राप्त गर्नुहुने छैन, तर निश्चित रूपमा, यो तपाईंको लिङ्क प्रोफाइल सुधार हुनेछ Source .